संरक्षकले नयाँ वेब उपस्थिति शुरू गर्‍यो Martech Zone
शुक्रबार, मे 2, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब म पहिलो पटक भाँडामा थिए संरक्षक, म डराएको थिएँ (हो, यो सहि छ) वेबसाइटमा जुन अप थियो। यो शुद्ध फ्ल्यास थियो, कुनै पृष्ठहरू थिएन, कुनै पछाडि अन्त्य अनुकूलन थिएन (यद्यपि SWFObject लोड भएको थियो), सामग्री अपडेट गर्ने कुनै माध्यम थिएन ... र सबै जसो कुनै यातायात छैन।
यो त्यस्तो साइट हो जुन लगानीमा कुनै प्रतिफलको साथ, धेरै खर्च भयो। जब म साइट विकास गर्ने एजेन्सीमा पुगेँ, त्यहाँ कुनै माफी मानेनन्। वास्तवमा, जब मैले एसईओको बारेमा गुनासो गरें, तिनीहरूले साइटलाई अनुकूलन गर्न अर्को मूल्यवान करारको प्रस्ताव गरे। त्यो अन्तिम पराल थियो! अन्तस्करण भएको कुनै पनि एजेन्सीले साइट निर्माण गर्ने छैन जुन कसैले पनि फेला पार्न सक्दैन।
एक रेन्ट पर्याप्त! मार्क गेलो र मैले हाम्रो साथ काम गर्यौं ब्रान्डि and र मार्केटिंग पार्टनरहरू क्रिस्टियन एन्डरसनमा र उनीहरूले हाम्रो लागि एउटा साइट डिजाइन गरेका थिए जुन लागू गरिएको छ इमेभेक्सको सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली। क्रिस्टियानको आफ्नो संगठनमा केही अविश्वसनीय प्रतिभा छ।
हामी यो लेआउटमा बसोबास गर्नु अघि साइटको केहि पुनरावृत्तिहरूमार्फत गयौं। मलाई विश्वास छ कि यसले हाम्रो कम्पनीको व्यावसायिकताको साथ साथै हाम्रो ब्रान्डले गति लिन शुरू गरिरहेको बलसँग कुरा गर्दछ!
साइट अब प्रत्यक्ष छ, र यो एकदम सुन्दर र नेभिगेट गर्न धेरै सरल छ। (यदि तपाईं सोचमा हुनुहुन्छ भने - हो, ब्लगि the भविष्यमा एक सुविधा हुनेछ)। यहाँ एक स्क्रीनशट छ:
म खुशी छु कि यो एउटा पक्ष हो जुन हामीले मार्केट बर्डका नयाँ निर्देशकलाई काममा लिनका लागि अघि पठाउन सक्षम थियौं! मलाई पुरानो साइटलाई बन्द गर्न मनपर्दैन।
मई 2, 2008 मा 9: 01 PM
खोज इन्जिनहरू द्वारा अनुक्रमित गर्न नसकिने वेबसाइटको लागि तपाईलाई बढी चार्ज गर्ने एजेन्सी को हो??
मई 2, 2008 मा 10: 12 PM
म तिमीलाई भन्न चाहन्छु, तर म तिमीमा पुरानो सपनाहरू जगाउन चाहन्न, जिम!
मई 3, 2008 मा 9: 49 PM
राम्रो देखिने साइट डग। केहि हप्तामा तपाईलाई अर्को नयाँ साइट (संकेत संकेत) देखाउन पर्खन सक्दिन 🙂